News - Dareen Habeenkii Halloween
Dareemay Habeenkii Halloween
Halloween, oo sidoo kale loo yaqaan 'All Saints' Day, waa fasax dhaqameed reer galbeedka ah 1-da Nofeembar sanad walba, iyo Oktoobar 31-keeda oo ku beegan maalinta Halloween waa waqtiga ugu firfircoon ee ciiddan.
Waxaa jira noocyo badan oo asalka ah ee Halloween, waxaana jira laba nooc oo si ballaaran loo faafiyey: halyeeygu wuxuu ka yimid 500 BC, Celtics waxay aaminsan yihiin in Oktoobar 31st ay tahay maalinta xagaagu si rasmi ah u dhammaaday. Waxay aaminsan yihiin in maanta dadka dhintay ay ku laaban doonaan dalkooda si ay u helaan nafaha, si ay dib ugu cusbooneysiiyaan cabsida ay dadku ka qabaan kuwa dhintay si ay ugu guuleystaan ​​noloshooda, sidaa darteed waxay isku labistaan ​​sidii bahallo iyo rooxaan si ay uga nixiyaan ruuxyada oo ay u ilaashadaan naftooda.
Hab kale oo loo dhaho ayaa ah: Halloween asal ahaan wuxuu ahaa iid lagu ammaano xilliga dayrta, sida maalinta May oo kale loo ammaano guga. Si loogu dabbaaldego imaatinka Halloween, carruurtu waxay u labbisan doonaan sida cirfiidyo qurux badan waxayna albaabka albaabka ku garaaci doonaan, iyagoo weydiinaya nacnac, haddii kale way khiyaanayn doonaan ama daaweyn doonaan.
Dareemay Halloween ayaa ku soo socota Handiwork! Jinniyo, bisado madow, bocor ..., walxaha oo dhami waa madadaalo in la ciyaaro
Qurxinta Guriga, Qurxinta Kirismaska, Qurxinta gidaarka, Qurxinta, Darbiga Farshaxanka, Qurxinta,